राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हुँदा धेरै खुसी भइन् पूर्वयुवराज्ञी हिमानी ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हुँदा धेरै खुसी भइन् पूर्वयुवराज्ञी हिमानी ? यस्तो छ कारण
कमल थापालाई चुनावमा हराउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हुँदा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह निकै खुसी भएकी छन्।
लिङ्देन राप्रपा अध्यक्षमा विजयी हुनासाथ आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत लिङ्देनको उच्च प्रशंसा गर्दै बधाई र शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन्।
‘अवसरवाद, नातावाद, कृपावादको अन्त्य गर्न सफल हुनु भएकोमा राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना’, हिमानीले लेखेकी छन्, ‘राजेन्द्र लिङ्देनको जितसँगै मुलुकले मुलुकले आज सच्चा राष्ट्रवादी नेता पाउन सफल भएको छ।’
उता आफ्नो हारमा पूर्व राजपरिवारको हात रहेको भन्दै रुष्ट कमल थापाले भने हिमानीको भनाइप्रति व्यंग्य गरेका छन्।
माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन : गुरुङको भागमा विधान, हितमानलाई व्यवस्थापनको जिम्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ११-१३ पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि कार्यविभाजन गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछि जारी गरिएको सर्कुलरअनुसार माओवादीको विधान परिमार्जन गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पाएका छन् । उनको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान परिमार्जन समितिले पार्टीको आगामी विधानको परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्नेछ ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा हुने सम्मेलनको मूल व्यवस्थापनको जिम्मा हितमान शाक्य नेतृत्वको सात सदस्यीय कमिटीले पाएको छ । सम्मेलनको प्रचारको काम भने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा गठित उपसमितिले गर्नेछ । सर्कुलरअनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिकाे छनोट मंसिर मसान्तसम्ममा सक्नुपर्नेछ । सम्मेलनमा सहभागी कुल सदस्यको ५ प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रले मनोनयन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
हरेक प्रदेशवाट ३० जनाका दरले र एक हजार पाँच सय संगठित सदस्य बराबर एकजनाले सम्मेलनमा भाग लिन पाउनेछन् । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३० मध्ये एकजना अपांगता भएका र सशस्त्र विद्रोहमा घाइते भएकाहरू अनिवार्य समेटिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।